Fitantanana mangarahara any amin'ny faritra Atsimo Andrefana - Transparency International - Initiative Madagascar
Fitantanana mangarahara any amin'ny faritra Atsimo Andrefana
Nivoaka ny 17 Febroary 2017 ao amin'ny
Transparency International Initiative Madagasikara dia mbola manohy ny fanohanany ireo kaominina telo ao amin'ny faritra Atsimo Andrefana: Sakaraha, Betsinjaka ary Miary, izany dia entina hanatsarana ny mangarahara sy hampihenana ny kolikoly, amin’ny alalan'ny fametrahana ny fomba fintantanana ara-bola izay iarahan’ny rehetra mandray anjara. Ny fandraisana anjara amin'ny fitantanana dia manana tanjona ny hampiditra ireo mpandray anjara rehetra eo anivon’ny kaominina amin'ny fanaraha-maso ny volam-bahoaka.
Taorian'ny fiofanana nomen’ny Transparency International Initiative Madagasikara tamin'ny Desambra 2016 no nizaràny boky momba ny fiaraha-monim-pirenena, ny lalàna mifehy ny fitsinjaram- pahefana tena izy ary koa, ny taridalana ho an'ny ben'ny tanàna eo anivon’ny Filan-kevitry ny kaominina, ny mpanatanteraka sy ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena (OSC).
Ny fanofanana 2 andro nomena ireo mandray anjara monisipaly sy ny fiarahamonim-pirenena dia nifantoka tamin'ireto lohahevitra manaraka ireto:
1. Ny fampadehanan-drahara eo anivon’ny kaominina
2. Ny fampandraisana anjara amin’ny fitantanana ara-bola ny kaominina
3. Ny fahaiza-mitantana
4. Ny fiaraha-monina
5. Ny fandaminana ny fiaraha-monin-pirenena
Fanofanana ireo kaominina 3 amin'ny fandraisana anjara amin'ny fitantanana: Sakaraha, Betsinjaka ary Miary
Transparency International Initiative Madagasikara dia mbola nanolotra peta-drindrina 13 ho an’ireo kaominina 3 ireo mba ahafahan’izy ireo mametaka ny teti-bolany sy ireo filazam-baovao samy hafa. Tsy izany ihany fa nandritra ny fitsidihan’ny ben’ny tanàna ny Fokontany ao amin’ny kaominina misy azy, dia mbola notohanana ihany koa izy ireo mba ahafahany manao kabary manoloana ny mponina. Nandritra izany fitsidihana izany dia nangon’ireo ben’ny tanàna ny hetahetan'ireo mponina ary nazavaina tamin’ny vahoaka ny antony tokony handoavan’izy ireo hetra.
Mbola marefo ny fikambanan’ny fiarahamonim-pirenena ao amin’ny kaominin’i Sakaraha, eny mbola tsy ahitana izany mihitsy aza ao amin’ireo kaominina 2 hafa ireo. Noho izany, mba hahazoana antoka ny fampiasana ireo fitaovana sy fampiharana ny mangarahara izay nampianarina, ny tompon’andraikitra misahana io tetikasan’ny TI-IM io, Atoa Rivo Randrianatoandro, dia nanaraka akaiky ireo nahazo fihofanana ireo nandritra ny 2 volana. Nanampy be dia be tamin’ny fanohanana ny birao regionaly OSC Atsimo Andrefaka izy ary nahafanan’ireo mpikambana eo an-toerana hanentana mpandray anjara hafa handamina ny fidinana an-tanety.
Fanentanana ny mponina mba handray anjara amin’ny fanaraha-maso ny fitantanam-bolan’ny kaominina misy azy
« Ny tsy fahampian’ny mangarahara dia antony iray mampisy ny kolikoly, noho izany, nataonay laharam-pahamehina ny fampahalalana ny mponina tao amin’io faritra io fa zony ny mahafantatra ny teti-bolan’ny kaominina misy azy, izany hafatra izany dia naparitaka tamin’ny alalan’ny afisy » hoy M.Rivo Randrianatoandro. Nandresy lahatra olo-malaza izy halaina sary apetaka eo amin’ireo afisy ireo.
Ao amin’ny kaominin’i Miary, ny tompon’andrakitrin’ny tetikasa dia nifidy mpihira ao anatin’ny tarika « B12 » miventy ny gadona « tsapiky ». Toy izany koa tao Betsinjaka, mpihira malaza avy any atsimo andrefana antsona hoe « Rebona » no nanaiky ampindrana ny sariny. Ho an’ny kaominina Sakaraha indray dia mpanao fanatanjaha-tena malaza eo amin’ny sehatra « volley-ball » antsoina hoe Tsareta no nanaiky handray anjara amin’io tetikasa io.
Ankoatra ireo afisy dia nanao fandaharana 19 tao amin’ny onjam-peo ary doka 49 (fandaharana mihisa 393) izay nalefa tamin’ny alalan’ny onjam-peo 3 teo an-toerana : Radio Ragnalahy ho an’ny Sakaraha, Radio Université de Toliara ho an’ny Betsinjaka ary Radio Télévision Siteny ho an’ny Miary, ny hafatra nahely tamin’izany dia fanentanana ny mponina handray anjara amin’ny fanaraha-maso ny fitantanana ny volan’ny kaominina misy azy.
Mba hampafantarana ny vahoaka ary hanazarana azy ireo amin’ny fiovana, Transparency International-Initiative Madagascar dia niantso mpanankanto malaza any amin’ny faritra Atsimo Andrefana. Ny natao tamin’izany dia Kabary, tononkalo, tantara an-dapihazo ary koa hira nentim-paharazana. Ny tropy mpanao tantara an-dapihazo« Toko Telo Mahamasanahandro » dia nanao fampisehoana tany amin’ny kaominina Miary ny 22 janoary, ary tany amin’ny kaominana Betsinjaka ny 29 janoary. Ny fikambanan’ny fiarahamonim-pirenena tao Sakaraha kosa dia nanao ny fampisehoana ny tantara an-dapihazo ny 08 febroary 2017. Fahombiazana tokoa ilay tetikasa satria olona maro dia maro no tonga nanatrika ireo fampisehoana ireo.
Io tetikasa io dia tohananan’ny « Fonds Canadien des Initiatives Locales (FCIL) du Gouvernement Canadien »